Zupco Inoderedza Mari Dzinobhadharwa neVafambi
Vanofamba nemabhazi anotakura veruzhinji vanoti vari kufara zvikuru nekudzikiswa kwemari dzekufambisa kwaitwa nekambani yeZupco .
Lockdown Inowedzerwa Zvakare neMamwe Masvondo Maviri
Mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, nezuro vakazivisa nyika kuti lockdown iriko ichaenderera mberi kwemamwe masvondo maviri nekuda kwekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere cheCovid-19
Nhomba dzeSinovac Mamiriyoni Maviri Dzinosvika Munyika
Zimbabwe yatambira nhomba dzeSinovac mamiriyoni maviri kubva kuChina panguva iyo nhomba yeCovid-19 iri kunetsa kuwana munyika.
Chipatara cheParirenyatwa Chowandirwa neVanhu Vanoda Kubayiwa Nhomba yeCovid-19
Mazana nemazana evanhu vanga vakaungana nhasi paParirenyatwa Hospital vachida kubayiwa nhomba yekutanga, asi izvi hazvina kuitika sezvo chipatara ichi chichikwanisa kubaya nhomba vanhu mazana mashanu chete pazuva.
Zimbabwe Yosimbaradza Mitemo yeCovid-19 Lockdown
Hurumende inoti yadzosa mitemo yose yakashandiswa pakatanga kubuda chirwere cheCovid-19 gore rapera sezvo huwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa pamwe nekufa nechirwere cheCovid 19 huri kuramba huchikwira munyika.
Varidzi veMabhawa Voyambirwa Kusungwa Kana Vakatyora Mitemo yeLockdown
Gurukota rezvemukati menyika, VaKazembe Kazembe, vakurudzira veruzhinji kuti varemekedze mitemo yakaiswa yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19.
Zvivakwa Zviri paGlen View Home Industry Zvinoputswa
Kanzuru yeguta reHarare yakafumira kuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo nemusi weChipiri mumusha weGlen View 8, panzvimbo inozivikanwa nerekuti Glen View Home Industry.
Amai Mutsvangwa Vanoti Mashoko aVaChinamasa eKushoropodza Studio7 Haana Kubva kuHurumende yeZimbabwe
Hurumende yeZimbabwe yazvisudurudza pamashoko evakafanobata chigaro chemurongi wemisangano muZanu PF, VaPatrick Chinamasa, avo vakashoropodza nhepfenyuro yeStudio7 vachiti inhepfenyuro ine ruvengo neZimbabwe uye yakafanana nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe.
Bato reMDC Alliance rinoti richaramba richirwira kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo, richiti rinoda kuti Zimbabwe Electoral Commission iise nzvimbo dzakawanda dziri pedyo nevanhu dzekunyoresa kuvhota.